Akeekkachiisa fuulawwan miidiyaa hawaasummaa sobaa! – ኢትዮጵያ ቼክ
Akeekkachiisa fuulawwan miidiyaa hawaasummaa sobaa!
Fuulawwan Feesbuukiifi Tiwiitaraa sobaa maqaa Aadde Xayibaa Hasaniin banaman odeeffannoowwan garaagaraa maxxansaa jiru.
Fuulawwan Feesbuukii maqaafi suuraa Aadde Xayibaa fayyadamuun banaman kunneen keessaa tokko hordoftoota Kuma 100 ol kan qabanidha.
Akkaawuntiiwwan sobaa kunneen yeroo yeroonis odeeffannoowwan garaagaraa yeroo maxxansan mul’ata.
Dhugummaa fuulawwan miidiyaalee hawaasummaa kunneenii mirkaneeffachuuf Itoophiyaa Cheek Aadde Xayibaa Hasan kan haasofsiise yemmuu ta’u, isaanis ‘profile’ Feesbuukii tokkofi akkaawuntii Tiwiitaraa tokko qofa akka qaban nutti himaniiru.
Kana malees ‘profile’ Feesbuukii tokkichaan ala fuulawwan Feesbuukii (pages) hordoftoota heddu horatan kunneen kan isaanii akka hintaane dubbatan.
Fuulawwan Feesbuukii sobaa maqaafi suuraawwan isaanii fayyadamuun banamanis yaadota isaan bakka hin buune barreessaa akka jiran Aadde Xayibaan Itoophiyaa Cheekitti himaniiru.
Adde Xayibaa Hasan toorawwan miidiyaalee hawaasummaa isaanii isaan sirrii Itoophiyaa Cheekitti kan himan yemmuu ta’u isaanis: ‘profile’ Feesbuukii (https://www.facebook.com/teyba.hasen.566) fi kan Tiwiitaraa (https://twitter.com/TeybaHassen) dha.
Kanaan dura Kantiibaa Magaala Shaashamannee, Pirezidaantii itti aantuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa akkasumas Gorsituu Dhimmoota Hawaasummaa Ministira Mummee ta’uun kan hojjetan Aadde Xayibaan yeroo ammaa Ejansii Dhimma Baqattootaafi Baqqattoota Deebi’aniitti Daayrektara Jeneraalaa Itti Aantuu ta’uun hojjechaa jiru.
Fuulawwan miidiyaalee hawaasummaa sirriifi amanamoo ta’an qofa hordofuun facaatii odeeffannoo sobaa hir’isuuf gahee keenya yaa bahannu.